Warshadda Rivet Nut - Shiinaha Rivet Nut Manufacturers, Suppliers
Hordhac Gacanta Jiidaha Laba -Jibaaran
Waxaa si weyn loogu adeegsadaa isu -imaatinka alaabooyinka elektaroonigga ah iyo kuwa warshadaha fudud sida baabuurta, duulista, qaboojiyaha, wiishka, beddelka, aaladda, alaabta guriga iyo qurxinta.
Qaab dhismeed bir ah oo ah nooca hemlock rivet
Ribbada qaabdhismeedku waxay leedahay awood aad u sarraysa, oo xudunta rivetku waxay ku xidhan tahay jidhka rivet ka dib markay ruxdo.
Rivet indha la '
Waxyaabaha: Aluminium buuxa
Rivet indhoole aan biyuhu lahayn
Csk madaxa aluminium rivets pop indhaha
Madaxa ka -hor -tagga iyo 120 rivets head countersunk ayaa inta badan loo adeegsadaa munaasabadaha riveting oo leh dusha siman iyo culays yar.
Waxaa loo adeegsadaa barxadda dhejinta taargooyinka biraha kala duwan, tuubooyinka iyo warshadaha kale ee wax soo saarka. Uma baahna taabashada dunta gudaha, alxanka lowska, riveting adag, hufnaan sare iyo adeegsi habboon.
Dhabarka Furayaasha Indhoolaha ah ee Furan oo leh Mandle Break Pull
Faa'iidooyinka rivets furan
Riveting cidhiidhi ah, kharash yar
Waxaa loo adeegsadaa barxadda dhejinta biraha kala duwan, tuubooyinka iyo warshadaha kale ee wax soo saarka.
CSK -da Yar ee Furan ee Rivet Nut
YUKE waa Soo -saaraha Warshadaha Xirfadlaha Shiinaha iyo Bixinta Noocyada kala duwan ee Rivet Nut.
Kala -duwanaanshahayaga Ballaadhka ah ee Wareegga Jirka ah ee Countersunk Knurled Rivet nuts ayaa ku habboon codsiyo fara badan.
Lowska Rivet wuxuu rakibi karaa saxan khafiif ah oo ay adag tahay in laga soo raro dhinac, saxanka naxaasta ah ee la farsameeyay si adag in loo xiro tuubada, birta birta sare, birta aan birta ahayn iyo badeecada xabagta.
Hawlaha: waxay bixisaa hab wax-ku-ool ah, wax-ku-ool ah oo lagu dhejinayo xargaha joogtada ah ee maxaabiista ah ee alaabta khafiifka ah, Gaar ahaan ku habboon in loo isticmaalo agabyada aadka u dhuuban si ay u daboolaan dunta la taabtay.
Nutsert -ku wuxuu bixiyaa awood korodhsan oo daloollo la dalooliyo.
Waxaan horumarinaa oo soo saarnaa lowska rivet si loo daboolo baahiyaha ku dhawaad ​​codsi kasta. Injineeradeena R&D gudaha iyo taageerada iibka farsamada waxay ku dadaalaan inay soo saaraan badeecadaha ugu fiican ee shuruudahaaga gaarka ah.
Madaxa CSK lowska rivet dhammaadka u furan Ku habboon alaabada adag, maadaama aagga dhalista oo kordhay ay kordhiso iska caabin xoog leh, Ku habboon in loo isticmaalo godadka la qoday ama la feerayay.